‘चुनाव खर्च जुटाउन’ सुन तस्करी ! – Himalaya TV
२४ भाद्र २०७४, शनिबार ०७:३४
काठमाण्डौ, २४ भदौ । सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको गृहकार्यमा सक्रिय रहेका बेला रजाधानीमा तस्करीको सुन बरामद हुने क्रम बढेको छ ।
लामो समयदेखि निर्वाचन चर्चामै समेटिएको थियो । गत पुसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता निर्वाचनका लागि सहमत भएसँगै मिति घोषणाको गृहकार्य सुरु भयो । यसैबीच राजधानीमा तस्करीका सुन भटाभट बरामद हुन थाल्यो । सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेकै बेला पुस १३ मा थानकोटमा ७ किलो सुन फेला पर्यो ।
सो सुनको अनुसन्धान सकिएकै थिएन पुस २१ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन फेला पार्यो । जसले राम्रै तरंग ल्यायो । जानकारहरुका अनुसार निर्वाचनका बेला तस्करीका घटना बढ्ने गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवारले ५ करोड खर्च भएको सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस्तो बेलामा दललाई उम्मेदवारको खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने नै भयो । यही बेला सुन तस्करी किन बढेको होला ? सुनचाँदी व्यवसायी मणिकरत्न शाक्य पञ्चायत कालदेखि नै सुन तस्करी हुने गरेपछि यसबारे धेरै चर्चा हुने गरेको बताउँछन् । सुन तस्करी राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएको उनको विश्लेषण छ । याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।